U-Jas GIBONY, ikhaya Lamaphupho nedamu lokubhukuda elishisayo. - I-Airbnb
U-Jas GIBONY, ikhaya Lamaphupho nedamu lokubhukuda elishisayo.
Sainte-Croix-à-Lauze, Provence-Alpes-Côte d'Azur, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jean Pierre
Lesi sibaya sezimvu sangekhulunyaka le-18 siphakathi nendawo yepaki enamahlathi engamahektha ama-3, ebheke eLubéron.
Emaphethelweni edolobhana elincane, ekungeneni kwe-Alpes de Haute Provence, uzothokozela izindawo ezinokuthula nezimangalisayo.
Indlu inamakamelo okulala ayi-6, indawo yokulala kanye namagumbi okugeza angu-4.
Eduze kwechibi lokubhukuda elingu-12x4.5 m, elishiswe ku-27 ° C, ithala elikhulu elimboziwe elinekhishi elihlomele, ishawa kanye nendlu yangasese kuzokuvumela ukuba uchithe usuku lonke, ubheke eningizimu, ubheke eLubéron.
Indawo yokuhlala ihlanganisa phansi: igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo kanye nethala elikhulu; ikhishi elihlome ngokuphelele; umtapo wolwazi; igumbi lokulala eliyinhloko elinendlu yokugezela yangasese (usinki ophindwe kabili, ishawa, ukugeza, indlu yangasese); amakamelo amabili okulala asebenzisa indlu yokugezela eyodwa; indlu yangasese ehlukene enesitsha sokugeza.
Phezulu, amagumbi okulala amabili, indawo yokulala enemibhede eyi-6 nendlu yokugezela (ishawa, usinki, indlu yangasese).
Ezingeni eliphansi, ifulethi elincane elinekhishi, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala negumbi lokugezela ngezindleko ezengeziwe okufanele zikhokhwe.
Ichibi lokubhukuda elibheke eningizimu elingu-12mx4.5m, lishise libe ngu-27 ° C kusukela ngo-Ephreli 1 kuya kuNovemba 1.
Ithala leSolarium elizungeze ichibi lokubhukuda elishisayo kanye nethala elikhulu elimboziwe, elinekhishi lasehlobo eligcwele kanye negesi yokosa inyama. Ishawa yelanga, ekhoneni leshawa kanye nendlu yangasese.
Inkundla yasePétanque (15x4m), i-badminton, ithenisi letafula, i-trampoline, amaswing.
Indlu inomshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, umshini wokomisa izintambo, ucingo, i-internet kanye ne-WiFi endlini kanye nase-swimming pool. Ukushisa okuphakathi.
4.91 · 13 okushiwo abanye
ISainte Croix à Lauze ingamakhilomitha angama-25/30 ukusuka emadolobheni ase-Apt, Forcalquier naseManosque. Vala: Vachères (Country Bistro, zokudla esitolo, Museum, isonto Saint Christophe, nemibukiso nasemakhonsathini futhi eziningi izenzakalo ehlobo.) (4 km), Banon (zonke izitolo, emakethe, ushizi yayo kanye Le Bleuet yayo esitolo sezincwadi, Paragliding) (18 km), Reillanne (zonke izitolo, imakethe) (12 km), Céreste (Isuphamakethe, isiteshi sesevisi, zonke izitolo, imakethe, umenzi wayo we-ayisikhilimu onobuciko Scaramouche) (12 km).
Izindlela eziningi zokuhamba izintaba nezintaba (i-GR4 iwela i-Sainte Croix).
Ngokuhamba ngebhayisikili, ugu lwaseSainte Croix ludumile, intaba yaseLure ayikude futhi iMont Ventoux ayikude kakhulu.
Ezindaweni ezizungezile, indawo yaseCarluc, i-abbey yaseValsaintes, inqaba yaseSauvan, iSaint Michel the observatory, iSimiane la Rotonde, izihosha zase-Oppedette, iProvencal Colorado eRustrel.
Inkundla yegalofu enezimbobo ezingu-18 e-Pierrevert kanye nenkundla yegalofu eyi-9-hole compact eVillars.
Singakuhlinzeka ngolwazi lokuqwala izintaba, ukubona indawo, imicimbi yamasiko, ezobuciko noma yokuzijabulisa ehlelwe endaweni. Futhi singakweluleka ngezindawo zokudlela ezinhle, ama-cellars nabakhiqizi bendawo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sainte-Croix-à-Lauze namaphethelo